Luulyo 16, 2017 7:27 g 4
Cawaysin wanaagsan dhegaystayaal, kuna soodhawaada barnaamijka cawaysnimo ee Caawa & Daljir. Barnamaijku wuxuu caawa idin kaga imaanaya istuudiyaha Daljir Bossaso, waxaana caawa idiin soojeedinaya wariye Xasan Heykal.
Qodobada Caawa & Daljir ugu doorka roon waxaa kamid ah:
Camey oo Gaalkacyo ku dhagax dhigay Wado laami ah
Diyaarado dagaal oo mareykan ah oo duqeeyay Gedo iyo jubada hoose oo ay kusugnaayeen saraakiil A-shabaab ah oo cadaan ay kujiraan
Dekeda Berbera oo laga soo dajiyay 90 kamid ahaa dadkii qaxootiga Soomaaliyeed ahaa ee lagu duqeeyay dalka Yaman.
CAAWA & DALJIR 639 Wararka 9487
Miro Macaan, Biyo Hooraya iyo Dalxiiska Ceelka Kalcad ee Deegaanka Cuun (sawirro)
Shuuke Adan Guray 1 year
Shuuke Adan Guray oo joogah #Bosaaso waan soo dhawaaynayaah wadada laga hirgaliyay galkacyo radio daljir waad ku.mahadsantihiin sida sharfta leh ee aad markasta aad bulshada usoo gudbisaan
Ali Indhojeego 1 year
Gumaadkii iyo xumaantii iyo xaasidnimadii Galmudug iyo xulufadooduba waa siibadanaysaa ee Xaafadda Baraxley silig iyo darbi isaga wareejiya una sameeya baro kontarool oo joogto ah oo dadka lagu baari karo ganacsiguna isaga gudbi karo si loo hakiyo dhagar qabayaasha gumaadka idinku dhammeeyey. Nabadgalyo xumada Galkacyo wey ka weyntahay arrin loodaayo “Police-ka” kaliya. Waa in military-gu lawareegaa baraha cusub iyo controlka iyo roondada magaalada iyo waliba magaalada degaanka ku wareegsan. Reer Galmudug waxay aaminsanyihiin cadawgaa cadawgiisu waa saaxiibkaa. Cadawga weyn ee reer Galkacyo waxaa gacansiiya reer Galmudug. Galmudug heshiiskeedu waxba idiin soo kordhinmayo maxaa yeelay ma ay xukumaan ficilka saaxiibkooda.